पीपीएल क्रिकेटः कस्को स्थिति कस्तो ? | Sagarmatha TV
पीपीएल क्रिकेटः कस्को स्थिति कस्तो ?
आज चार टोली मैदानमा उत्रिंदै
काठमाडौं । पर्यटकीय नगरी पोखरामा पहिलो पटक भएको पोखरा प्रिमियर लिगमा (पीपीएल) अन्तर्गत आज चार टोली मैदानमा उत्रिदैछन् । विहान ९ बजेबाट हुने पहिलो खेलमा चितवन राइनोजले एस्पर्ट धनगढीको सामना गर्दैछ भने दिउँसो सवा १ बजेबाट हुने खेलमा विराटनगर टाइटन र बुटवल ब्लास्टर्स आमने–सामने हुँदैछन् ।
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्काले नेतृत्व गरेको चितवन राहिनोजले प्रतियोगितामा अपेक्षाकृत प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । उसले यसअघिका दुवै खेलमा पराजय ब्यहोरेको छ । उसले पोखरा र बुटवलसँग पराजय ब्यहोरेको थियो । प्रतियोगिताको प्लेअफमा स्थान बनाउन चितवनका लागि धनगढीबिरुद्धको खेल गर या मरको अवस्थामा छ । यद्यपी कप्तान पारस खड्काले बाँकी तीनै खेल जितेर प्लेअफमा स्थान बनाउने दृढता लिएका छन् । प्रतियोगितामा एक जित र एक हारको नतिजा निकालेको धनगढीका लागि पनि यो खेल उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ । दुई इंग्लिस खेलाडीहरु पिटर ट्रेगो र ड्यान लरेन्सको प्रेरणामा धनगढीले शानदार प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
यता दोस्रो खेलमा बुटवलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको विराटनगरका लागि भने यो खेल निक्कै महत्वपूर्ण छ । सामान्य जितले मात्रै पनि विराटनगरको प्लेअफ यात्रा सुरक्षित हुने छैन । किनभने उसले यसअघिका तीन खेलमा लगातार हार ब्यहोरेको छ । ६ टोली सहभागी प्रतियोगितामा विराटनगरको दुई लिग खेल मात्र बाँकी छ । बुटवल ब्लास्टर्सले भने शानदार प्रदर्शन गरिरहेको छ । यसअघिका दुवै खेलमा जित हासिल गरेको बुटवल चार अंकसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ । बलिङमा कप्तान सोमपाल कामी र ब्याटिङमा युएईका कप्तान रोहन मुस्तफाले बुटवलको नेतृत्व लिइरहेका छन् । दुवैले अहिलेसम्म उच्चस्तरको प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
दुई चरणका खेल समाप्ति हुँदा तालिकाको पहिलो स्थानमा बुटवल ब्लास्टर्स रहेको छ । दुई खेलमा शतप्रतिशत जित हात पार्दै ४ अंकका साथ पहिलो स्थानमा रहेको छ । दुई चरणका खेल सकिँदा तीन टोलीले सतप्रतिशत नतिजा निकाले । सोमपाल कामीको बुटवल ब्लास्टर्स र ज्ञानेन्द्र मल्लको काठमाडौं रोयल्सले खेलेका दुवै खेलमा विजयी नतिजा निकालेका हुन् । राष्ट्रिय टोलीका कप्तानसमेत रहेका पारस खड्काको चितवन राइनोजले २ र सन्दीप लामिछानेको विराटनगर टाइटन्सले ३ खेल गुमाएका छन् । ६ टोली सम्मिलित प्रतियोगितामा चितवन छैटौं स्थानमा छ भने विराटनगर पाँचौं स्थानमा छ । तीनमध्ये दुई खेलमा विजयी नतिजा निकालेको शरद भेषावकरको पोखरा पल्टन दोस्रो स्थानमा छ । काठमाडौं तेस्रो स्थानमा छ भने बुटवल शीर्ष स्थानमा छ ।
पहिलो तीन खेलमा पराजित भएपछि सन्दीप लामिछानेको विराटनगरलाई अर्को चरण पुग्न धेरै कठिन छ । विराटनगरले अब बुटवल र चितवनसँग खेल्न बाँकी छ । पारस खड्काको चितवनलाई पनि उपाधि दौड कायम राख्ने हो भने बाँकी तीनै खेल जित्नुको विकल्प छैन । चितवनले अब धनगढी, काठमाडौं र विराटनगरविरुद्ध खेल्नेछ । सबैले उपाधि होड कायमै राख्न जित्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले पीपीएलमा अबका खेलहरु रोमाञ्चक बन्नेछन् । अन्य प्रतियोगिताहरुमा जस्तै पीपीएलमा पनि सबै टिमको नतिजामा विदेशी खेलाडीको प्रदर्शनले असर गरेको छ । प्रतियोगितामा धेरै रन बनाउने शीर्ष तीन ब्याट्सम्यानमा सबै विदेशी छन् । काठमाडौं रोयल्सका गौरव तोमरले दुई इनिङमा १ सय ६१ रन बनाएका छन् । तोमर प्रतियोगिताको एकै इनिङमा सबैभन्दा धेरै रन बनाउने खेलाडी पनि हुन् ।
भारतको उत्तर प्रदेशका उनले धनगढीविरुद्ध ९५ रन बनाएका थिए । दोस्रो स्थानमा पोखरा पल्टनका रवि इन्दर सिंह छन् । पञ्जावका रवि इन्दरले तीन इनिङमा १ सय २० रन बनाएका छन् । तेस्रो स्थानमा विराटनगरका मुहम्मद जाइद अलाम छन् । पाकिस्तानका मुहम्मद जाइदले दुई इनिङमा ८३ रन बनाएका छन् । ८३ रन बनाएका दीपेन्द्रसिंह ऐरी चौथोे स्थानमा छन् भने धनगढीकै पिटर ट्रेगो पाँचौ स्थानमा छन् । बलिङतर्फ भने नेपाली खेलाडी चम्किएका छन् । बुटवलका कप्तान सोमपाल कामीको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेको छ । त्यसमा पनि तिव्र गतिका बलरले राम्रो गरेका छन् ।
सोमपालले पहिलो खेलमा ४ विकेट लिएपछि बुटवलले पारस खड्काको चिवतनलाई ६५ रनमा अलआउट गरेको थियो । जुन प्रतियोगितामा अहिलेसम्म एक इनिङमा बनेको सबैभन्दा सानो स्कोर हो । सोमपालले ८ ओभरमा ३८ रन दिएर ६ विकेट लिइसकेका छन् । अर्का तिव्र गतिका बलर करण केसी दोस्रो स्थानमा छन् । ८ ओभरमा ४१ रन दिएका चितवनका करणले ६ विकेट लिइसकेका छन् । अर्का तिव्र गतिका बलर जितेन्द्र मुखियाले तीन इनिङमा ५ विकेट लिएका छन् । खुट्टाको चोटका कारण लामो समय मैदान बाहिर रहे पनि पछिल्लो समय लय समाउन संघर्ष गरिरहेका छन् ।